Madaxda dowlad goboleedyada dalka oo kusoo qul qulaya Muqdisho | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Madaxda dowlad goboleedyada dalka oo kusoo qul qulaya Muqdisho
Madaxda dowlad goboleedyada dalka oo kusoo qul qulaya Muqdisho
Magaalada Muqdisho waxaa kusoo qul qulaya madaxda dowlad goboleedyada dalka oo qaarkood ay soo gaareen magaalada Muqdisho si ay uga qeyb galaan shirka uu ku casuumay madaxweynaha JFS mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
Masuuliyiin katirsan dowladda ayaa madaxda dowlad goboleedyada dalka kusoo dhaweynaya garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho, madaxdaas oo uu ugu horeeyo Wasiirka Arrimaha Gudaha Federaalka iyo Dib u Heshiisiinta Mudane Cabdi Faarax Siciid (Juxa).
Wasiirka Arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta Soomaaliya mudane Cabdi Faarax Siciid (Juxa) oo warbaahinta lahadlay ayaa sheegay in wali ay kujiraan soo dhaweynta madaxda dowlad goboleedyada oo intooda badan iminka ay joogaan magaalada Muqdisho, sidaasi daraadeedna shirku uu furmi doono maalinta bari ah.
Madaxweynaha JFS mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa horey u iclaamiyey in dhamaadka bishaan Muqdisho uu ka furmayo shirka madaxda dowlad goboleedyada iyo dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya, kaasi oo arrimo badan lagu falanqeyn doono.
Previous articleGuuddoomiye Jawaari iyo wefdi uu hoggaaminayo oo u amba baxay Dalka Suudaan
Next articleRa’iisul Wasaare Kheyre oo dalka dib ugu soo laabtay